Imega ahụ ọ na - eme ka ọghara ime ọpụpụ? - Mmega
Isi > Mmega > Mgbatị ahụ na ime ọpụpụ - azịza ndị nkịtị
Imega ahụ ọ na - eme ka ọghara ime ọpụpụ?
Nwere ike Na-emega AhụIhe kpatara yaỌpụpụ? Ercmegịga ma ọ bụ tụtụrụ (ihe ezi uche dị na ya) ihe dị arọ — akpa nri, obere nwa, ma ọ bụ ihe ndị yiri ha yitụrụime ọpụpụ. N'ezie, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na nke ahụmmega ahụn'oge ime ime, ya na dọkịta gị,nwere ikealansogbu imebima mee ka mama na nwa ahụ ike.Mkpebi 16 2019
Nọrọ ruo na ngwụcha maka ndụmọdụ maka etu esi atakwa afọ ime ọzọ ime ọpụpụ n'oge. Anyị na-ekpuchi ọtụtụ ihe n'isiokwu a, mana mgbe ịmechara ile ihe, anyị ga-aza.
Ihe mbụ na ikekwe kachasị mkpa ị kwesịrị ịma gbasara ime ọpụpụ n’oge bụ na ọ bụ ihe a na-ahụkarị. N’agbata afọ 50 na 60% nke afọ ime niile na-akwụsị n’ike ọpụpụ. Ihe dị ka ọkara n'ime ndị a bụ ime ọpụpụ nke oge, nke na-ebukarị tupu nwanyị amata na ọ dị ime.
A na-akọwa ọpụpụ nke ime n'oge dị ka ọnwụ nke afọ ime nke na-eme n'ime izu iri na atọ mbụ nke ịtụrụ ime. Mana n'ezie, oge itutu ime na-eme tupu dọkịta gị ahụta nwa ebu n'afọ nwere mmegharị obi na ultrasound, nke na-ewekarị izu asaa na asatọ. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụ na ị nwere ime ọpụpụ n'oge ma nwee ọbara ọgbụgba, agbanyeghị, dọkịta gị nwere ike ịhụ ka obi nwa ebu n'afọ na-agagharị na ultrasound - 95% nke afọ ime ndị a na-ebute nwa ọhụrụ.
Agbanyeghị, nwayọ nwayọ nwayọ na ultrasound bụ ihe na-enye nsogbu. A na-ahụ nwayọ nwayọ nwayọ n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ọpụpụ oge mbụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ohere ime ọpụpụ n'oge bụ okpukpu iri atọ karịa ma ọ bụrụ na ultrasound gosipụtara obi dị ala.
A na - ahụ nwayọ nwayọ nwayọ yana ọbara ọgbụgba na 85% nke ọpụpụ n'oge. Kedu nwayọ nwayọ Ọ bụrụ na ọnụọgụ obi a tụrụ pere mpe erughị 110 kwaa kwa nkeji, ọ na-echegbu onwe. Ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ime ọpụpụ n'oge.
Ihe na-akpatakarị ya bụ na ẹmbrayo ma ọ bụ nwa ebu n’afọ anaghị enwe kromozon nke ziri ezi. Nwa ebu n’afọ nwere kromosom iri abụọ na isii - iri abụọ na atọ site na nne na nna ọ bụla. 60 ka 70% nke ọpụpụ oge mbụ nwere ọnụ ọgụgụ na-ezighi ezi nke chromosomes. ọnụ ọgụgụ a na-akawanye elu.
Ya mere, ụmụ nwanyị meworo agadi nwere ike ime ọpụpụ, ime ọpụpụ ọ bụla nwere ike ịpụta site na nsogbu chromosomal. Ihe ndi ozo nwere ike ime ka onodu gi ghara idi ime na mbu bu: smoking smokingụ mmanya na-aba n'anya na-a cafụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ karịa vitamin nke ihe ndị na-adịghị akpata ime ọpụpụ n'oge gụnyere: nchekasị inwe mmekọahụ n'oge afọ ime na-egosipụta n'oge afọ ime na-eji ọgwụ mgbochi tupu afọ ime adaa n'oge afọ ime ahụ erughị ala ma ọ bụ ọrịa ụtụtụ. N’ezie, ụmụnwaanyị na-arịa ụtụtụ nwere obere nsogbu ọpụpụ.
Ihe mgbaàmà kachasị nke ime ọpụpụ n'oge bụ ọbara ọgbụgba na ọnya. Ihe mgbaàmà ndị a na-erukwa ụmụ nwanyị ndị na-adịghị enwe ọpụpụ n'oge. Ọ bụrụ na ị dị ime ma nwee ọbara ọgbụgba, biko kpọtụrụ dọkịta gị ka inyochakwuo ya! Dọkịta gị ga-enwe nyocha ọbara iji tụọ ogo HCG gị yana ultrasound, nke dị mkpa n'ihi na ụfọdụ ụmụ nwanyị nwere afọ ime n'oge nwere ike nwee afọ ime ectopic, bụ nke na-adịkarịghị ma dị oke egwu.
Otu ajụjụ a na - ajụkarị bụ: Enwere ike igbochi nsogbu ọpụpụ n'oge na - adịghị? Azịza ya dabere na ị dịla ime, ọ bụrụ na ị dị ime ma chọọ igbochi ime ọpụpụ n'oge ime n'afọ ọzọ, enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịme. Kwụsị àgwà ọjọọ ndị a.
Zere mmanya na-aba n'anya, sịga, na caffeine. Ọ bụrụ na i buru oke ibu, felata, ma ọ bụrụ na ị mere agadi, jụọ dọkịta gị gbasara IVF yana ịnwale embrayo maka adịghị mma nke chromosomal. Y’oburu n’ichapu otutu ime na mbu, i.
H. atọ ma ọ bụ karịa hụ dọkịta gị ka ịlele maka mmebi afọ ime na-agagharị.
Enwere ike ịchọta nsogbu enwere ike dị ime, belụsọ ihe ndị m tụlere na mbụ, enwere ike ị gaghị eme ọtụtụ ihe. Ihi ụra agaghị enyere gị aka. Izere nrụgide anaghị enyere gị aka, n’agbanyeghị na o nwere ike ime ka obi dị gị mma.
A kwadoro ọgwụ mgbakwunye Progesterone n'oge gara aga, mana enwere obere ihe akaebe na ọ na-ebelata ohere ọpụpụ n'oge, mana ọ nwere ike ọ gaghị emerụ ahụ ọ bụla. Ajụjụ ọzọ a na-ajụ m oge niile bụ: Kedu otu ọsọ ọsọ ị ga-esi tụrụ ime mgbe ị tụchara ime? Cartọ ọpụpụ? N'oge gara aga, ndị dọkịta ekwuola na-enweghị ihe akaebe ọ bụla na ha kwesịrị ichere ma ọ dịkarịa ala ọnwa atọ, mana anyị nwere data sayensị siri ike na-egosi na ịnwa ịtụrụ ime ọzọ ozugbo ị na-amụ nwa nwere ike ime ka ohere nke afọ ime na-aga nke ọma na-eme n'ime izu ole na ole nke ọpụpụ n'oge. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ ọmụmụ iji tụrụ ime anyị na-atụ aro ka ị nyochaa oghere nke akpanwa tupu ịmalite ọgwụgwọ ọzọ Ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, cheta LIKE isiokwu a !!!! Ajụjụ, hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru Anyị ga-aza.
Denye aha na usoro ohuru nke Infertility TV kwa izu, pịa njikọ na nkọwa ahụ iji gaa na weebụsaịtị anyị ebe ị nwere ike ịdebanye aha dịka onye ọrịa
Olee ihe omume na-eduga ime ọpụpụ?
Abfọdụ ihe na-adịghị mma nke akpanwa ma ọ bụ nke na-esighi ike nke anụ ahụ (ụbụrụ na-enweghị ike) nwere ike ịbawanye ohereime ọpụpụ. Ụ sịga, mmanya na ọgwụ ọjọọ. Womenmụ nwanyị ndị na-ese anwụrụ n’oge afọ ime nwere nnukwu nsogbuime ọpụpụkarịa ndị na-anaghị ese anwụrụ. Alcoholụbiga ihe ọ andụ alcoholụ na-aba n'anya ókè na ị increaseụ ọgwụ n'ụzọ na-akwadoghị na-emekwa ka ohere nkeime ọpụpụ.16 jul. Dec 2019
Imega ahụ ọ na - emetụta afọ ime n'oge?
Ọ bụrụ na ahụ siri gị ike, ihe egwu nke ịdị na-emega ahụ oke oge n'ogeafọimedị nnọọ ala, nameeemeghị ka ihe ize ndụ nke ịmụ nwa dị ala, ibufee oge, ma ọ bụafọ imemfu. Tupu ị gaa n'ihu ochie gịmmega ahụeme ihe omume ma ọ bụ ịmalite nke ọhụrụ, ị ga-agwa dọkịta gị gbasarana-emega ahụmgbe ị dị ime.
Sarah Bjorkman na abụ m ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị na adịkwa m izu 11 ime uh na abụ m di ya, Abụ m Dr. Kurt Bjorkman na abụ m onye dọkịta na-ahụ maka ọrịa ụmụaka na anyị na-edekọ njem ime afọ a ka anyị na-ekepụta YouTube izu a na izu ime ndu maka ndị na-asụ bekee na ndị mmekọ ha na-enye gị ozi kwa izu gbasara ihe na-eme na afọ ime na ihe na-eme na mmepe ụmụaka na-emekwa.
Anyị na-emeso ihe niile ka i wee nwee ike ịkwadebe maka ọmụmụ na izu na-amụ nwa. Ee na kwa izu a. Izu Anyị ga-ekwu maka okwu a ma ama, Mmega ahụ na afọ ime, gbasara etu a ga-esi bulite uru nne na nwa aka na-enweghị etinye nkwojiaka, ya mere nọrọ na nche maka ihe na-esote mgbe ị nọ na youtube ma ị nụrụ olu gị na youtube instagram anyị nwere ọtụtụ ajụjụ banyere egwuregwu na afọ ime ọ dị mma gịnị ka m ga - eme ugboro ole kedu uru ọ bara ma ọ bụ nghọta zuru oke ihe kpatara nke ahụ bụ ọtụtụ ajụjụ ma enwere ọtụtụ ozi na ịntanetị na mmega ahụ na afọ ime na ụfọdụ n’ime ha bụ ezigbo ihe akaebe dabere na ụfọdụ n’ime ha abụghị.
Taa, anyị chọrọ inye gị eziokwu nke mere na ị ga-ebu ọtụtụ ihe akaebe. ? --I sitere na imalite na ozi emelitere banyere mmega ahụ mgbe ị dị ime ka ị nwee ike ịbawanye uru ahụike maka gị na nwa.Ma tupu anyị abanye na nke ahụ, ka anyị nụ mmelite banyere ihe na-eme mmepe nwa na izu 11.
Yabụ na ọ bụ izu nke iri na otu nwa ahụ adịla mma dịka obere mmadụ, ihe dịka nzu ma ọ bụ sentimita anọ n’ogologo site na mgbe nwa ahụ mepụtara nku anya wee bido. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na agwa na-emekarịrị anya, mmiri ọmụmụ nke gbara nwa ahụ gburugburu, nke nwatakịrị na-elo ma na-eku ume iji nyere aka na mmepe ume. Ozi kachasị site na ihe omume a bụ na arụ ọrụ ahụ n'ime afọ ime bụ ezigbo mkpa ị nwere ike ime iji belata nsogbu ime ime ma melite ahụike nne na nke uche.
eweli ngwa ngwa
Nke ahụ bụ nnukwu nkwupụta, mana ọ bụ eziokwu 100%, usoro ọgwụgwọ dị oke mkpa iji melite nsonaazụ maka nne na nwa. Eeh, yabụ ka anyị bido ihe omume a site na ịkọrọ gị ụfọdụ ihe ịtụnanya nke mmega ahụ, mgbe emechara ya nke ọma, nwere ike inyere nne na nwa aka, anyị ga-egosi gị ihe akaebe na-ekwu maka otu ị ga - esi mee ka ihe ndị a bawanye uru. Ya mere, anyị ga-eweta ihe ọmụma ozugbo na American College of Obstetrics and Gynecology yana nyocha dị ukwuu nke isiokwu 675 sayensị pụrụ iche ejiri na nhazi. ihe omume Canada na ntuziaka afọ ime.
Enwere ụfọdụ uru dị ịtụnanya metụtara ịgbaso ụkpụrụ nduzi ndị a. Ee, na ọkachasị maka nwatakịrị, enwere ike inwe obere nsogbu. E jikọtara ya na mbelata nke preeclampsia ọbara mgbali afọ ime Gestational ọrịa shuga E nwere obere ihe ize ndụ dị mkpa maka ịwa ahụ ma ọ bụ ịwa ahụ, yana enwere obere nsogbu nke urinary incontinence na oke ibu uru n'oge ime ime, ọ na - enyere aka na post a Ọnwụ ọnwụ afọ na ndepụta uru ndị a na-aga n'ihu maka ihe ndị dị ka njikwa njikwa shuga dị elu maka ndị nne dị ime, belata uru zuru oke n'oge ime ime yana ịbelata ihe egwu nke ịda mbà n'obi n'oge ime ime ma ọ bụ oke nhụjuanya nke mgbaàmà ịda mba, yabụ anyị na-enweta uru ndị a niile dị ịtụnanya site na Knowingmara banyere mmega ahụ na afọ ime, mana nke ahụ apụtaghị na ọ dị mfe mgbe niile, yana onye mụ na ya dị ime ọ bụ ọrụ m ugbu a ịgba m ume ma mee ka anyị nwee ike ijegharị ma na-arụ ọrụ ma hụ na anyị ga-esi anyị mgbatị ahụ maka ụbọchị ma mgbe ụfọdụ anyị ka bụ mmadụ na nke ahụ pụtara ee, n'ezie m ga-achụga gị ka ị rie ice cream ya mere kedu ihe bụ mgbatị ahụ n'ezie e na afọ ime tụrụ aro ime ya site? Anyị na-edekọ aha anyị dị ka ndụmọdụ isii dịka otu dị mfe dị ka o kwere mee. Womenmụ nwanyị niile na-enweghị mmegide ga-arụsi ọrụ ike n'oge ime ime ka ụmụ nwanyị ndị nwere oke mgbagha a nwere ike ịga n'ihu isonye na ọrụ ha nke ndụ kwa ụbọchị mana ha agaghị etinye aka n'ihe omume siri ike karị mgbe na-eme otu Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị nwere nkwenye onye ikwu, ọ dị mma ịnọdụ ala na dọkịta gị ka ị kpaa nkata na ọghọm nke isonye na mmega ahụ siri ike karị.
Nkwanye Nke Ntu Abụọ: womenmụ nwanyị dị ime kwesịrị igosipụta mmega ahụ ike dịkarịa ala 150 nkeji kwa izu iji nweta uru ahụike ahụ bara uru na mbelata na nsogbu ndị anyị kwurula banyere ya, ma ọ bụrụ na ị na-eche, olee otu ị ga - esi wepụta oke ike? Enwere ụzọ dị iche iche esi eche banyere ya. Nke mbụ dị mfe dị ka iji ọnụọgụ obi gị. Tebụl a nwere ike ịnye gị ụfọdụ ụkpụrụ nduzi a kapịrị ọnụ iji tụọ ike mmega ahụ n'oge afọ ime.
ịnyịnya ígwè maka ndị na-agba ịnyịnya
Goodzọ ọzọ dị mma bụ ule nyocha a na-agba ajụjụ ọnụ yana ebe ọ na-egosi na ọ bụrụ na ị naghị enwe ntụsara ahụ na mkparịta ụka gị ugbu a, ị ga-anwa ịgbanye ya ntakịrị ka ị nwee ike ịme nkwenye nke atọ na mmega ahụ ga-agabiga. ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ kwa izu, mana a na-atụ aro ihe omume kwa ụbọchị Ntuziaka ọnụọgụ anọ Womenmụ nwanyị kwesịrị ịrụ ọrụ iji tinye mmega ahụ nke aerobic na ọzụzụ dị arọ maka uru ahụike ka ukwuu. Enwere ụfọdụ nnukwu ọmụmụ sayensị na nyocha usoro nke gosipụtara mmụba na uru ahụike na afọ ime mgbe ejikọtara nguzogide na aerobics karịa ịme mgbatị ahụ naanị enwerekwa ụfọdụ ihe akaebe na ịgbakwunye yoga ma ọ bụ ịgbatị nwayọọ nwere ike ịnwe uru ndị ọzọ. ise Pelvic floor muscle training, nke a makwaara dị ka kegel exercises, nwere ike ịme kwa ụbọchị iji belata ihe egwu nke urinary. omefọdụ ọmụmụ na-egosi na ọzụzụ akwara pelvic dị na bekee na-ebelata ohere nke urinary prerenence site na 50 na ihe egwu nke urinary postnatal Kụda ihe dị ka 35 nwere ike ịbawanye mma site na mmega ahụ kwesịrị ekwesị, dị ka omume mgbatị pelvic na-atụ aro - may nwere ike ịmara nke ọma mgbe emechara ime yana nnukwu akpanwa na-ejikọkarị akụkụ nke ọbara na-agaghachi na obi mgbe ị nọ n'azụ gị.
Yabụ ọ bụrụ na ahụ erughị ala mgbe ị dina n'azụ gị, gbalịa ịchọta ọnọdụ ọhụrụ naanị n'ihi na ejiri m n'aka na ọtụtụ n'ime gị na-eche ma m chọrọ ka ị mata na mmega ahụ anaghị eso nke ọ bụla n'ime nsonaazụ ọjọọ ndị a. to Miscarriage Stillbirth Nwa amụrụ ọhụrụ Nnwụchu ịmụ nwa akaghi aka ịmụ Urinary Rupture Nwa amụrụ ọhụrụ Hypoglycemia Low Birth Weight Birth Miscarriages or Birth Complications Ya mere ọ bụrụ na ịnweghị nke ọ bụla n'ime contraindications anyị kwuru maka ya na mbụ. Ekwela ka egwu nke ihe ndị a gbochie gị igosipụta onwe gị ugbu a ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ị naghị eme ugbu a nkeji 150 a tụrụ aro mmega ahụ kwa izu. Nke ahụ dị mma, mana nkwanye ahụ bụ na ị ga - eji nwayọ rụọ ọrụ maka ebumnuche ahụ ka ị bụrụ otu n'ime ndị nne dị ịtụnanya ndị na - eme ezigbo ahụ.
Na-agba kilomita ise n’ụbọchị ma bulie ibu. Na-aga na klaasị na-agbagharị. Ọ dị mma, debe ya, ma burukwa n’uche na ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị gbanwee mmega ahụ gị ka afọ ime gị na-aga n’ihu.
Enwere ike ịnwe oge mgbe enweghị ike ịgbaso ndụmọdụ ndị a n'ihi ike ọgwụgwụ ma ọ bụ nsogbu afọ ime. Ou nwere ike wee laghachi na ndụmọdụ isii ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere ike ka ị wee ghọta ugbu a uru niile dị ịtụnanya nke ọzụzụ afọ ime na ma ọ dị mma n'ihi na ị na-eme ya Ajụjụ gị ọzọ nwere ike ọ gaghị abụ: Olee omume ndị anyị kwesịrị ịme? Achọrọ m ka ị mara na ọ dịghị ihe dịka ịme anwansi ma ọ bụ omume kachasị mma. Ebumnuche gị bụ ịme mgbatị ahụ nke 150 a kwa izu maka opekata mpe ụbọchị atọ n'izu Ka ị na-emega ahụ n'oge a dị ime karịa mfe karịa mgbe ụfọdụ achọtara m onwe m ma ọ bụrụ na anaghị m emega ahụ n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie ọ naghị eme, ee, n'ihi na na njedebe nke ụbọchị m ike dọpụ m buns si n'ihe ndina ihe ndị ọzọ nyeere m aka nwere ụfọdụ ọhụrụ egwuregwu bras maka ụmụ agbọghọ uh Enwere m a nkwado belt a ime eriri maka ime n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na afọ gị bụ a bit ibu a otutu ndị enyi m kwuru na nke a bụ na-enye aka jide n'aka na ị na-a drinkụ a otutu mmiri adịghị overheat mgbe ọ 90 degrees n'èzí, adịghị emega ahụ n'èzí na-emecha na-ege ntị gị ahu na-agbalị ime ihe omume a Ọ bụrụ na ị ànyị nwere ike ijide n'aka na enwere ahịa na-eto eto maka mmega ahụ na atụmatụ dị ime afọ ime, na agbanyeghị na ndị a dị mma g ma nwee ike inye aka karịsịa mgbe ịchọrọ ebe mmalite, ha adịchaghị mkpa.
Cheta, ebumnuche ebe a bụ ka ị na-arụ ọrụ ma nwee ike ịdị mfe dị ka ịga ije na mmasị na yoga pilates ịgba ịnyịnya na-egwu mmiri jikọtara ya na obere nguzogide ma ọ bụ ọzụzụ dị arọ. Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-egosipụta nke a dị mma. Chọrọ ịmalite nwayọ wee jiri nwayọ mụbaa ego ị na-eme.
Malite na naanị nkeji ise ma gbakwunye nkeji ise kwa ụbọchị na izu ruo mgbe ị ga-enwe ike ịme 30 nkeji kwa ụbọchị ka ahụ gị wee gbanwee ọtụtụ mgbanwe dị ịtụnanya n'oge ime ime na ụfọdụ n'ime ha dị ezigbo mkpa mgbe ị na-ahọrọ homonụ mmega ahụ, nke a na-eme n'oge afọ ime n’ezie na-eme ka ụfọdụ nkwonkwo gị nwee obere ntụsara ahụ. Nke a ga - abụ ihe dị oke mkpa mgbe ị mụrụ mmadụ ọnwa ole na ole ka e mesịrị. O nwekwara ike ịhapụ ụfọdụ nkwonkwo gị na-agagharị ntakịrị ntakịrị ma nwekwuo mmerụ ahụ.
N'ihi nke a, ọ dị mma izere njakịrị, imegharị mmegharị nwere mmetụta dị elu mgbe ọ bụla enwere ike. Also ga-ahụkwa na nguzozi gị na-agbanwe site na afọ na-eto eto, ị ga-ahụkwa na etiti ike ndọda gị dị ntakịrị, na akwara gị na nkwonkwo gị, ọkachasị gị na azụ gị na akụrụ, na-ebugharị ya ọ bụ ihe dị mma Echiche ịbụ mara mgbanwe a na uche gị. Ọ bụrụ na ịnọghị na nsogbu, gbatịa ma lelee anya ngbanwe ahụ gị.
I nwekwara ike ịchọpụta na ị na-eku ume obere obere karịa ka ọ na-adị. Mgbanwe iku ume n'oge afọ ime Nke a bụ ikpe maka ihe abụọ dị mkpa: mkpa anụ ahụ gị maka ikuku oxygen na-abawanye, ma emesịa n'ime afọ ime, ị ga-enwe akpanwa nke na-eguzo n'ụzọ nke iku ume miri emi. Yabụ mgbe ị nwetara nke a.
Mara na afọ ime na ọ nwere ike bụrụ nke zuru oke, ugbu a enwere omume ole na ole iji zere dịka: B. don'tchọghị ime ihe ọ bụla ebe ị nwere ike inwe mkparịta ụka ịkpọtụrụ afọ gị, yabụ na enweghị ihe ọ bụla basketball, enweghị mgba, enweghị ọkpọ, ehee, bọọlụ, ihe ọ bụla adịghị otu ahụ. wgba mgba siri ike na gị, uh, ọ dị mma ịghara ịga na mbara igwe, belụsọ na ọ bụ You ga-ezere ihe niile ebe ị nwere ike ịda ọzọ ị chọghị ịdakwasị gị afọ ka ọ ghara ịgba ọsọ skiing na-agba ịnyịnya a ho rse wdg yeah uh Mmega ahụ dị ka yoga dị ọkụ ma ọ bụ pilates na-ekpo ọkụ nwere ike izere ka ha na-eduga na akpịrị ịkpọ nkụ na Oke iwe.
Etinyela n'ime ime, um, ma agbalikwala imega ahụ dị elu karịa puku isii ma ọ bụrụ na ị bi ugbua Ma ị bụ onye egwuregwu ma ọ bụ onye mbido, ndị a bụ ụfọdụ ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị ị ga-ele anya mgbe ị na-emega ahụ . Ọ bụrụ n’ịchọpụta otu n’ime ndị a, ị kwesịrị ịkwụsị ma gwa dọkịta na-ahụ maka ọrịa gị ihe dịka ọbara ọgbụgba, iku ume tupu ịmalite imega ahụ, ma ọ bụ isi awọ ma ọ bụ isi ọwụwa ma ọ bụ nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu obi, adịghị ike mọzụlụ, mgbu nwa ehi ma ọ bụ ọzịza nwa ehi ma ọ bụrụ nwee mkparịta ụka na-egbu mgbu mgbe niile ma ọ bụ mmụba nke mmiri site na ikpu gị Rịba ama, oge eruola ka ị kpọọ dibia gynecologist gị iji chịkọta ya niile site na ịbụ Onye na-arụ ọrụ na afọ a izu ụka a bụ nọmba nke ihe ị nwere ike ime iji belata nsogbu nne na nna ma meziwanye ahụike nne. Nsonaazụ Mgbe Do Na-eme Nwa nke Onwe Gị, ị chọrọ inyere aka n'ụzọ kwa wantchọrọ ịmega ahụ nkeji 150 nke ịdị ike na-adịkarịghị kwa izu. Nakwa ntakịrị ugbu a dị mma karịa ihe ọ bụla Ya mere, nke a bụ ihe dịịrị anyị n'izu a.
Olileanya na nke ahụ bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmega ahụ na afọime. Hapụ okwu n’okpuru anyị ga-achọ ịkparịta ụka ma echefukwala ịpị bọtịnụ ‘denye aha’ iji jide n’aka na ị ga-elele isiokwu anyị n’izu na-abịa. Anyị na-ele anya ịhụ gị niile.
Anyị kwuru n'isiokwu a na ọ bụ maka ebumnuche mmụta ma ọ bụ ntụrụndụ naanị. Ebughị n'obi ka ọ bụrụ ndụmọdụ ahụike. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ahụike akọwapụtara, ị ga-akpọtụrụ ndị na-eweta ọrụ gị
Jump nwuli elu nwere ike ime ọpụpụ n'oge afọ ime?
Ọpụpụọ bụghịkpatarasite na omume nke nwanyi dị ime dị mma, dịkana-awụli elu, mmega ahụ siri ike, na inwe mmekọahụ mgbe niile. Nsogbuna-ebute ime ọpụpụnaanị adịkarịghị. Nchegbu na ujo nke mmetụta uche adịghịmee ọpụpụma obu.Ọgọst 26 2010
Orgasim ọ nwere ike ime ọpụpụ?
Ọ bụrụ na afọ ime gị bụ nke nkịtị na ịnweghị nsogbu, inwe mmekọahụ naorgasmsagaghị eme ka ihe ize ndụ gị nke ịbụ oru n'oge ma ọ bụmee ka ịpụ ọpụpụ. Mgbe e mesịrị na ime, iheorgasmma ọ bụ ọbụna mmekọahụ n'onwe yanwere ikesetịpụ obere mgbatị.
Enwere m ike ịme ịnọdụ ala na ọnwa atọ mbụ?
Nọdụ ala-acha ọkụna crunches n'ozuzu dị mma naakpa ọnwa atọ, ma ọ kasị mma izere ha mgbe emechara. (Ha ga-esiwanye ikemeedika nke giafọimeNa-aga n'ihu.) Ọzọkwa, idina ala azụ n'azụ ime ime gị na-eme ka ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara ji erugharị n'ahụ gị belata, ọ pụkwara ime ka isi malite ịtụ gị.
Ọ dị mma ịme mgbatị ahụ na izu 5?
Ọ bụrụ na ịmeghịmmega ahụmgbe niile tupu ị nwetaime, ugbu a bụ oge iji nweta omume nke ga-enyere gị aka na ndụ gị niile. Malite na mgbatị dị ala ma rụọ ọrụ ruo 30 nkeji kwa ụbọchị, 3 ka5oge kwaizu. Nọvemba
Egwu ọ nwere ike ime ọpụpụ?
N'otu aka ahụ, oké mkpọtụ mberede na-akụda gị adịghịmee ka ịpụ ọpụpụ. Ọtụtụna-akpatankeime ọpụpụbụ ma amaghị ma ọ bụ karịa ike gị. Ihe karịrị ọkara nkeime ọpụpụna akpa ọnwa atọ a na-eche na ọ bụ ihe agharakpatarasite n'ọdịdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị n'ime akwa.
Nwere ike caffeine nwere ike ime ọpụpụ n'oge afọ ime?
A: Azịza ya bụ ụgha - ya na ụfọdụ ọdụ mmiri. Ruo ọtụtụ afọ, ndị ọkachamara na-amụ banyere ụmụ nwanyị chere na ọ dị mmakafiinoriri ụba ihe ize ndụ nkeime ọpụpụ.June 4. 2012 r.
ihe omume igwe kwụ otu ebe 2020
Ọ dị mma ịnwe Orgasim n'oge mbido ọnwa atọ?
Dọkịta nwere ike ịkọwa mgbe anaghị enwe mmekọahụnchekwa n'oge afọ ime. Mgbe ụmụ nwanyị na-enwe ụfọdụ nsogbu, ndị dọkịta nwere ike ịkwado izere yaorgasmsna mmekorita nwoke na nwanyi - tinyere igbo onwe ha -n'oge ime. Mmachibido ahụ nwere ike ịbụ nwa oge ma ọ bụ tinye ya dumafọime.20.05.2019
Kedu mgbe ịmalite ịmalite ime ihe iji gbochie ime ọpụpụ?
N’ezie, ndị dọkịta na-agbakarị ụmụ nwaanyị dị ime ume imega ahụ́. Agbanyeghị, otu ọmụmụ ụmụ nwanyị Denmark nke ụmụ nwanyị 92,671 nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynecology na Ọktoba 2007 chọpụtara na mmega ahụ siri ike tupu izu 18 nke afọ ime nwere ike ime ka ohere ime ọpụpụ.
Mgbatị ahụ ịnọ ọdụ nwere ike ime ọpụpụ?
Nwere ike nọdụ-elu na-akpata ime ọpụpụ n'oge afọ ime? Nọdụ ọdụ ma ọ bụ mmega ahụ abụghị nhọrọ kwesịrị ekwesị maka nwanyị dị ime. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ nwere nsogbu karịa ime gị karịa ezi. Ọ bụ enweghị nchedo n'ihi na, na mbụ, ọ gụnyere idina azụ gị.
Nwere ike mmega ahụ na ọnwa atọ mbụ nke afọ ime?
Mgbatị ahụ nwere ike ime ọpụpụ na ọnwa atọ mbụ? Azịza dị mfe bụ mba. Mgbe emezuru ya; mmega ahụ nwere ike ime ọpụpụ. Ọ bụrụ na afọ ime gị dị mma, ọ nweghị ihe egwu na-emega ahụ. Ọtụtụ ndị nne na-echegbu onwe ha ịma jijiji gbasara ụmụ ha ka ha na-emega ahụ́; echegbula onwe gị banyere nke ahụ.